हिउँदे ऋतुमा तिब्बती पर्यटन_china.com
हिउँदे ऋतुमा तिब्बती पर्यटन
केही वर्षयता तिब्बतले "हिउँदे ऋतुमा तिब्बत भ्रमण" पर्यटन योजनामा ध्यान दिइरहेको छ। हिउँदे ऋतुसँग अनुकूल रहेका धेरै पर्यटन कार्यक्रम तयारी भएका छन्। त्यसबाट धेरै चिनियाँ तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित भएर हिउँदे ऋतुमा तिब्बत भ्रमण गरेर विशेष अनुभव लिन उत्साही भएका छन्।
तिब्बतका प्रसिद्ध पर्यटन व्यवसायी याङ स्यु छ्युङ्गका अनुसार, हिउँदे ऋतुमा तिब्बतमा अक्सिजन मात्रा र ग्रीष्म ऋतुबीच धेरै फरक छैन तर सुक्खापन धेरै हुन्छ। मध्यान्ह घाम लागेर तापक्रम बीस डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी पुग्छ। साथै हिउँदे ऋतुमा तिब्बतका धेरैजसो दृश्यावलोकन क्षेत्रको टिकट मूल्यमा आधा छुट हुने र धेरैजसो होटेलको खर्च पनि आधा घट्ने हुन्छ। त्यसैले हिउँदमा तिब्बत भ्रमण गर्न सस्तो र सजिलो हुन्छ।
तिब्बती भूभाग समुद्री सतहबाट उच्चभागमा परेकाले चीनको मुख्य भूमिभन्दा धेरै फरक मौसम रहेको छ। त्यसैले तिब्बत पुग्ने पर्यटकले धेरै पानी पिउने र आराम गर्नु जरुरी छ। त्यहाँ साथै रक्सी र धुम्रपान राम्रो हुँदैन। साथै लेक लाग्ने संभावना भएकाले प्रतिरोधी औषधि र सूर्यको किरण तथा हिउँको टल्काइबाट बच्न सन ग्लास जस्ता सामग्रीको तयारी गर्नुपर्छ।
मौसम राम्रो छ, पर्यटक त्यति धेरै छैनन्, पर्यटन खर्चमा छुट छ भने हिउँदे ऋतुमा तिब्बत भ्रमण गर्नु उत्तम हुन्छ। तर हिउँदे ऋतुमा तिब्बत घुम्नका लागि केही विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।
1. हिउँदे ऋतुका दिनमा ल्हासाको तापक्रम ‌औसत रुपमा पन्ध्र डिग्री सेल्सियस पुग्छ तर रातमा माइनस पाँच डिग्री सेल्सियस पुग्छ। त्यसैले बाक्लो लुगा बोक्नुपर्छ । अर्कातिर धेरैजसो होटेलमा हिटर छ त्यसैले रातमा सुत्दा चिसो हुँदैन।
2. धेरैजसो मानिस समुद्र सतहभन्दा उच्च भागमा नबसेकाले तिब्बत पुग्दा लेक लाग्न सक्छ। त्यसैले लेक प्रतिरोधी औषधि पनि साथमा बोक्नुपर्छ। यसबाहेक रुघा खोकी आदि सामान्य औषधि पनि साथमा राख्नुपर्छ।
3. तिब्बत समुद्री सतहबाट उच्च भागमा परेकाले घाम पनि धेरै लाग्छ। त्यसैले विशेष प्रकारका सन ग्लास लगाउनुपर्छ र घाम प्रतिरोधी स्क्रिम लगाउनुपर्छ।
4. यदि हिमाली क्षेत्रको अवलोकन गरेमा हिम ग्लास लगाउनुपर्छ। र हिमाली क्षेत्रमा धेरै जाडो भएकोले फ्रोस्बाइट स्क्रिम तयारी गर्नुपर्छ। यदि फ्रोस्बाइट भएमा तीस चालीस डिग्री सेल्सियसको पानीमा कपडा राखेपछि फ्रोस्बाइट लागेको ठाउँमा राख्नुपर्छ र रगत रङ्ग फेरि आएपछि फ्रोस्बाइट स्क्रिम लगाउँदा राम्रो हुन्छ।
5. तिब्बतमा हाइकिङ्ग गर्ने इच्छा भएमा पेशागत हाइकिङ्ग जुत्ता लगाउनुपर्छ।
6. हिउँदे ऋतुमा सबै ट्राभल एजेन्सी खुल्दैनन्। त्यसैले त्यहाँ जानुअघि टेलिफोन गरी सोधपुच्छ गर्नु राम्रो हुन्छ।
7. हिउँदे ऋतुमा तिब्बत घुम्दा तिब्बती नव वर्ष, वसन्त चाड, आरु फूल महोत्सव आदि रमाइलो चाड-पर्व पर्छन्। त्यसैले त्यहाँ जानुअघि वेभसाइटमा त्यससम्बन्धी विषय-वस्तु तयारी गर्नसकिन्छ यसरी नै अझ राम्रोसँग तिब्बती संस्कृति बुझ्न सकिन्छ।